Creative Writing » ကြောင်ကြီးအိ မွေးဏေ့ဆုတောင်း BD	7
မြစပဲရိုး says: ကြောင်ဝါ ကနေ ကြောင်ဖြူ ဖြစ်သွားပဟေ့။
kai says: Thant Myint-U The Third-Anglo Burmese War begin 130 years ago today.
မြစပဲရိုး says: အာ့ နဲ့ ကြောင်ကြောင် မွေးနေ့ နဲ့ ဘာများ ဆိုင် လို့ တုန်း။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: တခြားနိုင်ငံ တွေမှာ မလုပ်ဘူးတဲ့ဟာမျိုးလဲ လုပ်ကြည့်ချင်တယ်။
twitty says: လေးစားပါတယ် ဦးကြောင်…။
ဦးကြောင် ပြောခဲ့တဲ့ အချိန်က… ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စ… လွှတ်တော်ထဲကြိုးပမ်းမှု… အောင်မြင်မှု မရတဲ့အချိန်…။ ပြည်သူတွေက ဒေါ်စုအပေါ် မျှော်လင့် အားထားချက်တွေ လျော့မလိုဖြစ်နေချိန်မှာ ဦးကြောင်က တောင်ပြို ကမ်းပြို နိုင်မယ်လို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဦးကြောင်ရဲ့ နိုင်ငံရေး ခန့်မှန်းချက်ကို လေးစားပါကြောင်း ဒီနေရာကနေ ပြောပါရစေ…။ ဒေါ်စုအပေါ် ဦးကြောင်ရဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေကို ကြိုက်တာလဲရှိ… မကြိုက်တာလဲရှိ…။ လက်ခံတာလဲရှိ… လက်မခံတာလဲရှိ…။ သို့ပေမယ့်… မြန်မာ့နိုင်ငံရေး စောင့်ကြည့်နေသူ တစ်ဦးထံက ဒီလို ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ခန့်မှန်းချက်က… အခြားသူတွေတော့မသိ…။ ကိုယ့်အတွက်တော့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ အထိုက်အလျောက် လျော့ပါးသွားစေတာ အမှန်ပါ…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကြောင်သက် အရဆို ၁၃ နှစ်လောက် ရှိရောပေါ့
Wow says: ကကြောင်က တစ်နှစ် နှစ်သားကျတာလားးးး မွေးနေ့က ခီနခီနဆိုတော့လေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.